Yucera 1200MPa na -ehulata ike HT zirconia eze ngọngọ na oghere ọcha oghere maka ụlọ nyocha akụrụngwa eze
Okwu mmeghe Zirconia Block
Ihe mgbochi Yurucheng zirconia nwere ike dị elu, ọmarịcha permeability na mmetụta ndozi agba mara mma nke dabara maka sistemụ CAD/CAM na sistemụ ntuziaka. Atụmatụ Ngwaahịa Nchekwa: Enweghị mgbakasị ahụ, enweghị corrosion, ndakọrịta bio dị mma Mma: Enwere ike mepụtaghachi agba ezé eke Nkasi obi: conductivity dị ala dị ala, mgbanwe na -ekpo ọkụ na oyi anaghị akpali mkpali ahụ Anọgide: Karịa 1200MPa ike na -akpaghasị, na -adigide ma baa uru.
HT zirconia onye na-eme ihe eze na-akwụ ụgwọ nke ọma ụlọ nyocha eze zirconia na-egbochi CAD CAM
Akụrụngwa ụlọ nyocha ezé translucent Zirconia YUCERA Zirconia Block
* Nnukwu translucent
* Ike gbagọrọ agbagọ na ngọngọ akụ na ụba
* Kwesịrị ekwesị maka ịnagide na nhazi
Ihe ngosi: ịnagide, Inlay, Onlay, Bridge, Crown
Ihe eji eme eze eze Zirconia na -agbachi ihe mgbochi CAD CAM eze mgbochi Zirconia maka sistemụ D98.
Njirimara Block Zirconia eze
ike flexural dị elu, nguzogide mgbaji ọkpụkpụ, ogologo ọpụrụiche, yana ngwa igwe egwe ọka dị mfe nwere nkenke. Diski zirconia nke nwere ndò nwere agba nwere agba atọ nwere agba dị mfe Ijikwa: Polish ma ọ bụ Glaze mgbe Sintering dị mma maka okpueze contour na àkwà mmiri zuru ezu.